Réponses pour «anatin»:
Na ny tarehintsoratra izáy ampiasaiko ato anatin‘ny Lahaporontafako ato ihány aza, dia tsy izáho RADANIELINA Ignace Marie Julien mihίtsy no namorona azy fa mpindrana ihány aho.
‚fanirian’ny tsirairay ny hanana fiainana tonga lafatra, ary ao anatin’izany ny hetahetam-pirahalahiana tsy mety lefy, te hiaina ny maha mpiray tampo, ka manosika antsika hikatsaka fiombonana amin’ny hafa, izay tsy jerena ho fahavalo na mpifanandrina, fa toy mpiray tampo tokony horaisina an-tanan-droa ary hofihinina eo an-tratra.
Ny alatsinainy 18 fevįrié 2007, dia niara-nanapaka ny Antenimierampirenéna sy ny Antenimierandoholona Fįrãşáy fa hosoratana ao anatin‟ny Lalampanorenana Fįrãşáy mihίtsy ny lalána fototra momba sy mikasika ary manantitrantitra, ny fanafoanana ny Fanamelohana Olombelona ho faty.
TADY LAHARANA 186 64%
voalohany tao anatin‘ny Tantaran‘ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā izáo no nisy Papa anakiróa niara-nonina tao Vatik ;
TADY LAHARANA 187 53%
Ny vavaka, ary ny vavaka ihany no fihaonana toy izao, nanjary hiranay ilay hoe “Vorona nampahery ahy ao anatin’ny sarotra.
DEPLIANT RAJABO 2018 49%
Ny voalohany dia ny 13 Rajabo, izay tsingerin-taonan’ny nahaterahan ny Imamo Ali (A) tao anatin ny Ka’aba tao Lameka.
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016 45%
COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel 45%
FAMPIASANA NY BOKY Ho an‟ny fitsipika mifehy ny fomba fitenenana dia lesona iray isan‟andro no hoezahan‟ny mpianatra ho voafehy mba ho hainy ao anatin‟ny iray volana daholo ireo fitsipika fototra mifehy ny fiteny anglisy.
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY 44%
Tsy tokony hisy olona mifehy ho tratrin’io fotoana io ao anatin’ny NY VOLANA MASINA RAMADANY TAONA FAHA 18 (2001 – 2018) houssencharly@gmail.com Pejy 2 @ 12 loto mitaky fandroana toy ny janaba… Tsaratsara kokoa ny mahavita ny s’alat agrib sy Isha vao manapaka fifehezana raha tsy sanatria hoe efa tena malemilemy be ka tsy manana hery hiatrehana an’izany intsony.
Betsaka ny zavatra manaranaka ao anatin‘ny olombelona ao, hoy ihány izy iréo.
Bulletin Mensuel Tresor N38 29%
Nangingina nandritra ny 5 taona Zara raha nisy ny hetsika ara-kolontsaina tao anatin’ ny dimy taona taorian’ny nandraisan’ ny Malagasy an-tanana ny fitantanana ny Trésor.